10 Zoos-yada Ugu Fiican Ee Lagu Booqdo Caruurtaada Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Zoos-yada Ugu Fiican Ee Lagu Booqdo Caruurtaada Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 27/11/2020)
La safrida caruurta Yurub waxay noqon kartaa caqabad. Sidaas, aad ayey muhiim u tahay in lagu daro waxqabadyo yar oo ay caruurtu ka heli lahaayeen, sida booqashada mid ka mid ah 10 xayawaanka ugu fiican Yurub. Qaar ka mid ah xayawaanada ugu fiican adduunka waxay ku yaalliin Yurub. In wadnaha ee magaalooyinka ugu fiican in Europe, waxaa jira meelo barakaysan oo cagaaran, iyo 10 xayawaanka ugu fiican ee lagu booqdo carruurta Yurub.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka Ugu Jaban Dunida.
1. Schonbrunn Zoo In Vienna
Schonbrunn Beerta xayawaanka ee Vienna, sidoo kale hoy u yahay 500 noocyada xoolaha, tan 1752. Tusaale ahaan, xadiiqada xayawaanka ee ugu da'da weyn Yurub waxaa ku yaal maroodiga Afrika iyo baandaha weyn. The 42 acres Viennese zoo waxay ku taalaa qasri dhexdood waxayna leedahay soojiidasho yaab leh oo loogu talagalay caruurta iyo waalidiinta.
Tusaale ahaan, guriga keymaha ee beerta xayawaanaadka ku yaal waa muuqaal aad u foolxun oo uu dad sameeyey oo ah kaymo dhab ah oo wata duufaanno. Markaad ku meeraysato si aad isha ugu hayso Aasiyadaha yaryar ee jilicsan iyo xuubabka vampire. Intaa waxaa dheer, Guri dabadheer, shabeel iyo haramcad, guriga koala iyo guryo badan oo badan oo ka mid ah xayawaanka cajiibka ah ayaa ku sugaya.
Albaabka laga galo Beerta Xanaanada Xoolaha ee Schonbrunn ee ku taal Vienna waa bilaash baasaboorka Vienna. Waxaad ku imaan kartaa U4 Hietzing dhulka hoostiisa.
Qiimaha Qiimaha Milan ilaa Venice
Qiimaha Bologna ilaa Venice
Qiimaha Tareenka ee Treviso ilaa Venice
2. 10 Xayawaanka ugu Fiican Yurub: Beerta Xaragada Alpine ee ku taal Innsbruck
Waxay ku taalaa neefta Tirol gudaha Austria, xadiiqadda Alpine ee ku taal Innsbruck waxay hoy u tahay in ka badan 150 noocyada xoolaha. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. Sidaas, haddii aad qorsheyneyso safar qoys oo aad ugu aadeyso Alps, hubi inaad waqti u hesho Alpenzoo Innsbruck.
Carruurtaadu waxay gabi ahaanba la yaabi doonaan orso bunni ah, Lynx, gorgor dahabi ah, otters, iyo salam dabka. Kuwani waa wax yar oo ka mid ah noocyada xayawaanka ee aad ku dhex arki doontid xadiiqadda Alpine. Halka ay caruurtaadu u bogi doonaan xayawaanka, waa lagaa qaadayaa adiga views qeybalay.
Waxaad ka heli kartaa beydaan cajaa’ibka leh waa by gaadiidka dadweynaha, ka faras magaalaha. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira ikhtiyaarro kala duwan oo baasaboor saaxiibtinimo u habboon, sidaa darteed wax walba waad arki kartaa.
Qiimaha Tareenka ee Munich ilaa Innsbruck
Qiimaha Tareenka Salzburg ilaa Innsbruck
Oberstdorf ilaa Qiimaha Tareenka Innsbruck
Qiimaha Tareenka ee Graz ilaa Innsbruck
3. Xayawaanka ugu Fiican Czech Republic: Beerta Xayawaanka Prague
Prague waxay caan ku tahay buundooyinka cajiibka ah, muuqaallo muuqaal ah, naqshadaha, iyo xaflado. Si kastaba ha ahaatee, dad badani ma oga wax ku saabsan xayawaanka Prague, waana taas goob sharaf ku dhex leh xayawaannada ugu fiican Yurub ee lagu booqdo carruurta.
o.5 kiiloomitir oo laba jibbaaran ayaa ka dhigaysa beerta xayawaanka ee Prague mid ka mid ah xayawaannada waaweyn ee Yurub, guryaha ka badan 4000 xayawaanka. Sayidka, waxaa jira taambuugyo badan iyo xoolo si loo salaamo, tusaale ahaan, Shanti maroodiga Aasiya, Bikira, goriilla saaxiibtinimo, iyo xayawaan badan oo kale oo u gaar ah oo qurux badan.
Beerta xayawaanka ee Prague waa mid furan maalin kasta waxaana lagu tagi karaa bas ama taraam. Taladayada loogu talagalay madadaalo qoys oo ku taal Prague waa in la qorsheeyo safar maalinle ah oo qoys ah oo loogu tago beerta xayawaanka ee Prague maxaa yeelay carruurtaadu waxay gabi ahaanba doonayaan inay sahamiyaan dhammaantood.
4. 10 Xayawaanka ugu Fiican Yurub: Beerta Beerta Baarliin
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are just a few of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. Xayawaanka dhifka ah iyo kuwa qalaad waxay ka dhigayaan Berlin mid ka mid ah xayawaannada ugu fiican ee lagu booqdo carruurtaada Yurub.
Beerta Beerta Xayawaanka ee Berlin waxay ku taal bartamaha mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Yurub, beerta xayawaankuna ma aha mid ka reeban. Haddii aad ku sugan tahay magaalada dhammaad usbuuca, markaa waa inaad si hubaal ah waqti uga heshaa xayawaanka, teendhooyin, iyo quraaradda.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan xayawaankani waa inay jiraan qiimaha tikidhada qaaska ah qoysaska yar ama weyn, gelitaanka keli ah ee xayawaanka, ama isku dhaji irridda quraaradda.
Qiimaha Tareenka Frankfurt ilaa Berlin
Leipzig ilaa Qiimaha Tareenka ee Berlin
Hanover ilaa Qiimaha Tareenka ee Berlin
Qiimaha Tareenka ee Hamburg ilaa Berlin
5. Beerta Xayawaanka ugu Fiican Hamburg: Xerada xayawaanka ee Hagenbeck
Hamburg waa wax weyn magaalo-nasasho, iyo magaalo madadaalo leh oo lagu booqdo carruurta. Hagenbeck Tierpark ee Hamburg waa hal tusaale oo ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee Hamburg lagula sameeyo carruurta. Waa mid ka mid ah xadiiqooyinka ugu quruxda badan Yurub iyo Jarmalka. Guri furan oo ka badan 1,800 xayawaanka, beertan xayawaanka ah ee cajiibka ahi waxay leedahay Badweynta Arctic. Badweynta Arctic waa halka aad ka bilaabi kartid xiisaha qoyska, oo booqo bears, penguins, iyo orso badda.
Haddii aad joogtid Hamburg dhowr maalmood, markaa waa inaad heshaa Kaarka Hamburg. Sidan ayaad ku raaxeysan doontaa qiimo dhimis weyn soo jiidashada dalxiiska, iyo qiimo dhimis lagu sameeyo beero xayawaanka lagu xanaaneeyo iyo aquarium-ku kulaylaha ku yaal beerta xayawaanka ah.
Qiimaha Tareenka Berlin ilaa Hamburg
Bremen ilaa Qiimaha Tareenka Hamburg
Hanover ilaa Qiimaha Tareenka Hamburg
Qiimaha Tareenka ee Cologne ilaa Hamburg
6. Beerta Xayawaanka Antwerp ee Biljamka
Mid ka mid ah sare 10 xayawaanada ugu fiican Yurub waa Antwerp Zoo. Sida mid kasta oo ka mid ah xayawaannada la yaabka leh ee ku jira liistadayada, Beerta Xayawaanka 'Antwerp Zoo' waad ku bogi kartaa xayawaanka ugu quruxda badan adduunka. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah waxyaabaha ka soocaya Beerta Xayawaanka Antwerp iyo xayawaanka kale, waa Barnaamijka gaarka ah ee loogu talo galay xayawaannada halista ku jira, sida bonobos iyo okapi.
Xadiiqadii ugu wanaagsanayd ee Biljim ayaa si ballaadhan u ballaarisay sannadihii la soo dhaafay. Beerta xayawaanku aad bey u koray oo waa maya bartamaha magaalada, aad ugu dhow xarunta dhexe. Waxaa intaa dheer, zoo's Skywalk ayaa daaha ka qaadi doona inta ugu badan muuqaal dusha sare leh ee jardiinooyinka iyo mid ka mid ah magaalooyinka ka baxsan-laga-garaacay ee Yurub.
Qiimaha Qiimaha Tareenka Brussels ilaa Antwerp
Amsterdam ilaa Qiimaha Tareenka Antwerp
Lille ilaa Qiimaha Tareenka Antwerp
Paris ilaa Qiimaha Tareenka Antwerp
7. La Palmyre Zoo In Les Mathes, France
Beerta quruxda badan ee loo yaqaan 'Les Mathes zoo' ee ku taal La Palmyre waxay ku taal kaymaha cagaaran iyo jiqda. Waxaa jira wadiiqooyin calaamadeysan oo adiga iyo carruurta ku geyn doona safar ku saabsan adduunka xayawaanka iyo waxyaabaha yaabka leh ee dabiiciga ah ee mid ka mid ah xayawaannada ugu fiican Yurub..
Libaaxyada badda duurjoogta ah iyo bisadaha duurjoogta ah, Flamingos Carreabean, iyo qoolley waaweyn, waa wax yar oo ka mid ah xayawaanka gaarka ah ee aad la kulmi doonto. Beertan xayawaanka ah ee cajiibka ahi waxay ku taal gobolka cusub ee loo yaqaan 'Aquitaine' ee dalka Faransiiska, xeebta Atlantic, a great adventure from Paris tareen.
Qiimaha Tareenka Amsterdam ilaa Paris
Qiimaha Tareenka London ilaa Paris
Qiimaha Tareenka ee Rotterdam ilaa Paris
Qiimaha Tareenka Brussels ilaa Paris
8. Xayawaanka Artis ee Magaalada Amsterdam
Just 15 daqiiqado u jirta bartamaha magaalada, waxaad ka heli doontaa beerta xayawaanka ee ugu horreysa Amsterdam iyo mid ka mid ah xayawaannada ugu fiican Yurub. Artis Royal Zoo waxaa ku yaal zebra, balanbaalis, kalluunka kulaylaha, iyo noolaha ugu yar yar ee soo jiidan doona caruurtaada, at ARTIS-Micropia.
A booqo Amsterdam zoo waa mid ka mid ah howlaha qoyska ugu wanaagsan ee lagu qabto Amsterdam. Oo leh waababyo badan, quraaradda, iyo geedo duug ah, Xerada Artis Zoo ee Amsterdam waa mid ka mid ah muuqaalka iyo meelaha gaarka ah ee la booqdo marka Nederland joogo.
Waxaad ka fiicnaan laheyd inaad iibsato tikidhada Artis Zoo iyo Micropia si aad ugu raaxeysato wax walba oo ay leedahay Royal Royal zoo.
Qiimaha Tareenka Brussels ilaa Amsterdam
Qiimaha Tareenka London ilaa Amsterdam
Qiimaha Tareenka ee Berlin ilaa Amsterdam
Paris ilaa Qiimaha Tareenka Amsterdam
9. Xayawaanka ugu Fiican England: Xayawaanka Chester
Beerta xayawaanka ugu weyn England ayaa ku taal Cheshire oo hoy u ah in ka badan 35,000 xayawaanka. Xerada xayawaan ee loo yaqaan 'Chester zoo' waa mid ka mid ah xayawaannada ugu fiican Yurub si ay ula soo booqdaan carruurtaada maaddaama ay jiraan xayawaanno iyo beero aad u tiro badan oo la baadho. Waxaa jira xayawaan ka socda adduunka oo dhan, sida liinta, hornbill weyn, hornbill, iyo xayawaan badan oo kale oo u gaar ah.
Sidoo kale, haddii aad haysato waqti aad ku ballaariso reerkaaga dibedda, hubi inaad soo booqato jardiinooyinka qurxoon ee ku yaal xadiiqadda. Uruurinta ubaxa ee ku yaal Chester zoo waxay leeyihiin magac caan ka ah adduunka, iyo orchids gabi ahaanba waa kuwo gaar ah. Booqashada Chester zoo waa waxqabadka reerka ee banaanka.
Qiimaha Tareenka Amsterdam Ilaa London
Qiimaha Tareenka ee Paris ilaa London
Qiimaha Tareenka ee Berlin ilaa London
Qiimaha Tareenka Brussels ilaa London
10. Xayawaanka ugu Fiican Yurub: Basel Zoo In Switzerland
Xayawaanka ugu fiican Switzerland waxay ku yaalliin bartamaha Basel. Basel zoo waa hoy ay ku nool yihiin xayawaan ka kala yimid daafaha dunida, oo waxaad ku ogaan doontaa xayawaan kasta oo ka mid ah dadka dabiiciga ah ee ku nool xeryaha kala duwan.
Wax kale oo la yaab leh oo dhigaya xayawaanka Basel 10 xayawaanka ugu fiican Yurub, waa xanaanada carruurta. Halkan carruurtaadu waxay ka heli doonaan fursad qaali ah oo ay kula kulmaan xayawaannada guryaha laga keeno ee adduunka ka socda, xayawaanka rabaayadda ah, oo quudin.
Booqashada Beerta Xayawaanku waa firfircoonaan bannaanka u ah qoyska oo idil. Jardiinooyinka cagaaran iyo keymaha, xayawaanka iyo dhirta aan caadiga ahayn, xiiso gelin doona oo madadaalin doona carruurta. The 10 xayawaanka ugu fiican Yurub si ay ula soo booqdaan carruurtaada, waa guntimaha qarsoon ee Yurub, oo waxay u qalmaan ugu yaraan safar maalinle ah oo buuxa.
Qiimaha Munich ilaa Basel
Qiimaha Tareenka ee Zurich ilaa Basel
Bern ilaa Qiimaha Tareenka Basel
Geneva ilaa Qiimaha Tareenka Basel
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno qorsheynta booqasho la yaab leh oo lagu tagayo xayawaanka ugu fiican Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Xayawaanka ugu Fiican Si Aad Ula Soo Booqato Caruurtaada Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, waxaadna u badali kartaa / ja ilaa / ama ama de iyo luqado badan.
adventure BestzoosEurope Safarka Yurub Yurupwithkids qoyska kids tareen safarka Travelingwithkids zoo
Tareenka Safarka Belgium, safarka Europe